Apple ayaa lagu eedeeyay inuu ku xad gudbay patent-ka Wi-Fi ee CalTech | Waxaan ka socdaa mac
Apple ayaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay patent-ka Wi-Fi ee CalTech
Nidaamka shatiga ayaa horseed u ah dacwadaha, Apple-na kuma cusba xaaladdan. Eedeyntii ugu dambeysay waxay ka timid Machadka Farsamada ee California o Caltech. Shahaadooyinka Caltech ee lagu xusay kiiskan gaarka ah ayaa la xareeyay sannadihii u dhexeeyay 2006 iyo 2012, oo diiradda la saaro Xeerarka IRA / LDPC. Waxay adeegsadaan habka ugu fudud ee loo yaqaan “encoding and decoding circuitry” ee loogu talagalay in lagu hagaajiyo waxqabadka iyo heerarka xogta guud. Tiknoolajiyadaas oo kale ayaa hadda lagu hirgeliyaa heerarka 802.11n Wi-Fi y Wi-Fi 802.11ac, kuwaas oo loo isticmaalo badeecooyin badan oo Apple ah.
Dacwadda ka dhanka ah Apple waxaa lagu sameeyay Maxkamadda Federaalka ee California, oo sheegay in alaabada Apple, ay ka mid yihiin iPhone, iPad, Mac, iyo xitaa kan Apple Watch codeeyeyaasha ayaa la adeegsadaa, taas oo macnaheedu yahay Apple waxay jabineysaa afar shati.
Apple waxay soosaartaa oo iibisaa alaabada Wi-Fi ee kujirta codbixiyaasha IRA / LDPC iyo dikoodarro xadgudubya shatiyadahan. Waxyaabaha jebiya shatiyadan ayaa kala ah: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, MacBook Air, xitaa Apple Watch.
Isla dacwada, CalTech sidoo kale wuxuu soo xiganayaa Broadcom waxa ku qoran sidoo kale ku xadgudubka isla shatiyadaha. Tani macno ayey samayn doontaa, iyadoo la tixgelinayo in Broadcom uu yahay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn ee Apple u siiya Chips-ka Wi-Fi. Chips-yadaas waxaa lagu rakibay noocyo badan oo ka mid ah alaabooyinka moobiilka ugu caansan ee Apple, oo ay ka mid yihiin MacBook Pro Retina, MacBook Air, iyo qaar ka mid ah iMacs.
Apple waa mid ka mid ah macaamiisha ugu weyn ee Broadcom. Sannadihii 2012, 2013, iyo 2014, iibinta Apple waxay u taagneyd 14,6%, 13,3%, iyo 14,0% dakhliga saafiga ah ee Broadcom Corp., siday u kala horreeyaan.
Ma garanayno sida tani ku dhamaan doonto, iyo waxa ay Apple ka codsan doonto ku xadgudubka shatiyadahan. Laakiin waxa aan ognahay waa inuu isagu codsaday a xeerbeegtida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple ayaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay patent-ka Wi-Fi ee CalTech
Apple Pay waxay ku darsataa taageerada BMO, TD iyo Scotiabank ee Kanada
Martiqaadyada loogu talagalay WWDC 2016 ayaa looqaybiyay